Ogaden News Agency (ONA) – Afur wadaag ay jaaliyadda S.Ogadenya iyo Oramia ku yeesheen magalada Perth
Afur wadaag ay jaaliyadda S.Ogadenya iyo Oramia ku yeesheen magalada Perth
Posted by ONA Admin	/ August 16, 2012
Waxaa xaflad afur-wadaag ah yeeshay taariikhdu markay ahayd 15/08/12 jaaliyadda S.Ogadeniya ee magaaladda Perth iyo jaalidda Oromiya ee isla magaaladaas Perth. Afurkan oo si waca loo soo agaasimay ayaa looga gollahaa in hawl wadeenada labada jaaliyadood ay is bartan isla mar ahaantaana ay billaabaan xiriir dhaw oo dhaxmara labada urur bulsheed.
Xafladatan oo ay soo diyaarisay jaaliyadda S.Ogadeniya ayaa lagu furay ayaadaha qur’aanka karimka ah iyo wacdi diini ah kadib markii afurkii laga faraxashay. Sheekh cabdiqadir Cali Guray oo asagu soo jeediyay muxaadarada diiniga ah ayaa kusalay hadalkiisa alle kacabsi iyo in laga faaiidaysto bishan rabadaan ee lagu jiro 10kii danmbe ee cadaabka la iskaga xoraynayo.
Sidoo kale sheekhu waxa uu ku nuux nuuxsaday sida ay muhiim u tahay in qoomiyadaha ku abtirsada diinta islaamka ay yeeshay wadashaqayn iyo isxiriirin walaaltinimo.
Intaas kadib, waxaa la wareegay warbaahiyaha Halgame Adan Dakhare oo ah gudoomiyaha jaaliyadda S.Ogadeniya waxuuna halkaa kawarbixiyay jaaliyaddiisa kuna tilmaamay kulanka mid taariikhi ah oo muhiimad balaadhan u leh sidaa awgeedna ay hawl wadeenada jaaliyaddu kasii shaqayn doonaan sidii loo sii xoojin lahaa xiriirka walaaltinimo ee labada jaaliyadood kadhaxeeya.
Waxaa mudan in laxuso labada jaaliyadood ee S.Ogadeniya iyo Oromiya ayaa ah ayagu kuwo kasoo jeeda geeska afrika dhul iyo deegaanna aanan kala fogayn dhanka juqraafiga. Waxay labada qoomiyadoodba halgan adag ay kugula jiraan gumaysiga waqtigiisu dhamaaday ee Ethiopia.
Waxaa madashan goobjoog ka ahaa Afhayeenka JWXO Mudane Cabdiqadir Xassan Hirmooge oo halkaas kasoo jeediyay khudbad kooban taas oo uu kusoo jeediyay luuqadda carabiga sidii ay horayba oogu soo jeediyeen masuuliyiinta qaarkood. Masuulku waxa uu ku ammaanay labada jaaliyaddodba xiriirka wanaagsan ee ka dhaxeeya iyo fursadan muhiimka ah sida ay ooga wada faa’iidaysteen. Sidoo kale waxa uu warbixin kabixiyay guud ahaan geeska afrikan gaar ahaana xaaladda uu ku suganyahay maamulka waqtigiisa dhamaaday ee Ethiopia.
Dhanka jaaliyadda Oromiya waxaa ka mid ahaa xubnihii u hadlay Mudane Maxamed Nuur oo asagu aad iyo aad oogu bogay sida wanaagsan ee ay u wada afureen labada jaaliyaddood ee walaalaha ah. Waxa uu sheegey in Oromiya iyo Ogadeniya ay yihiin hal shacab cidda doonaysa in ay kala dhantaalaan maantana ay tahay Tigreega waqtiguusu dhamaaday. Waxa kale uu sheegay in muslimiintu aad u kacsanyihiin gudaha Ethiopia kadib markii la xidh xidhay culamaa’ udiin qaarna la laayay, muslimiintuna hadday Zanaawi kacabsan jireen taasi dhamaatay maanta ayuu yidhi.
Afur-wadaagan oo si wanaagsan labada dhinacba looga soo dhaweeyay ayaa ahaa mid jawi wacan kusoo dhamaaday isla mar ahaantaana lagu wada-dardaarmay in ciidul fitriga ha goob laguwada ciido xiriirka labada jaaliyaddoodna kor loo sii kobciyo.
waa wax aad iyo aad uwanaagsa in ay labada umadood ee walaalaha ah ay is kaashadaan si ay uga baxaan duliga ragaadiyay ee ay ku hayaan abasiiniyiintu waxaana maanta lajoogaa wakhtigii ay iska qaadi lahaayeen heeryada gumaysiga waana in halkaas lasii wadaa wadaa wada shaqaynta iyo iskaashiga la iskana ilaaliyo labada dabaqoodhi ee raba in ay isku diraan shacabka walaalaha ah dariska ah wax walbana wadaaga guulaysta ayaan idinleeyahay